Inona no Dikan’ny hoe Nahazo Maimaim-poana, ka Manome Maimaim-poana?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Boligara Cebuano Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Groenlandey Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Koreanina Kroaty Letonianina Litoanianina Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Norvezianina Népali Pendjabi Poloney Portogey Rosianina Serba Slovaky Slovenianina Tagalog Tailandey Tiorka Tseky Vietnamianina
‘Efa Nahazo Maimaim-poana Ianareo, koa Manomeza Maimaim-poana’
‘EFA nahazo maimaim-poana ianareo, koa manomeza maimaim-poana.’ (Matio 10:8) Izany no toromarika nomen’i Jesosy ny apostoliny, rehefa naniraka azy ireo hitory ny vaovao tsara izy. Nankatò ve izy ireo? Eny tokoa, ary nankatò azy io foana izy ireo, na dia efa tsy teto an-tany intsony aza i Jesosy.
Rehefa hitan’i Simona, mpanao ody ratsy taloha, ohatra, fa nanana hery hanaovana fahagagana ny apostoly, dia nitady hanome vola azy ireo izy, mba hahazoany an’izany hery izany koa. Niteny mafy azy anefa i Petera, nanao hoe: “Aoka ho very mbamin’ny tenanao ny volanao, satria nataonao fa azo vidim-bola ny fanomezan’Andriamanitra.”—Asan’ny Apostoly 8:18-20.
Nanana toe-tsaina toy ny an’i Petera koa ny apostoly Paoly. Azony natao, ohatra, ny niantehitra tamin’ny rahalahiny kristianina tany Korinto, mba hanome azy izay vola nilainy. Nanao asa tanana anefa izy, mba hivelomany. (Asan’ny Apostoly 18:1-3) Tena afaka nilaza àry izy fa nitory ny vaovao tsara tamin’ny Korintianina, nefa tsy nampandoa vola azy ireo.—1 Korintiana 4:12; 9:18.
Mampalahelo anefa fa maro amin’ireo miseho ho mpanara-dia an’i Jesosy no tsy vonona ‘hanome maimaim-poana’ toy izany. Mpitondra fivavahana maro ao amin’ny Kristianisma Anarana no ‘mampianatra mba hahazoany karama.’ (Mika 3:11) Ny mpitondra fivavahana sasany aza nanjary nanankarena mihitsy tamin’ny vola nalainy tamin’ny mpiangona tao aminy. Nisy mpitoriteny amerikanina iray voaheloka higadra 45 taona, tamin’ny 1989. Nahoana? Satria “nanodinkodina vola an-tapitrisa dolara izy, ka ny ampahany tamin’izany nividianany trano sy fiara, sy nandehanany nanao vakansy, ary nividianany tranon’alika misy fampangatsiahana rivotra koa aza.”—Gazetim-bahoaka Isan’andro (anglisy), 7 Oktobra 1989.
Voalazan’ny gazety iray any Ghana, tamin’ny 31 Martsa 1990, fa nalain’ny pretra katolika iray ny rakitra voangona nandritra ny lamesa, ka natsipiny tany amin’ny mpiangona. “Ny antony”, hoy ilay gazety, dia “satria olon-dehibe ireo mpiangona, ka tokony hanome vola betsaka kokoa.” Manao fihetsiketsehana toy ny loka na zavatra hafa ny fivavahana sasany, mba hahazoam-bola. Tsy mahagaga raha manjary mampirisika ny mpiangona ao aminy ho tia vola izany.
Mifanohitra amin’izany anefa ny Vavolombelon’i Jehovah, satria miezaka mafy izy ireo mba hanahaka an’i Jesosy sy ireo mpianany tamin’ny taonjato voalohany. Tsy misy mpitondra fivavahana karamaina ao amin’izy ireo. Andraikitry ny Vavolombelona tsirairay ny mitory ny vaovao tsaran’ilay fanjakana. (Matio 24:14) Maherin’ny enina tapitrisa àry izy ireo eran-tany no mitondra ny “ranon’aina” maimaim-poana any amin’ny olona. (Apokalypsy 22:17) Afaka mandray soa amin’ny hafatra ao amin’ny Baiboly, na dia “izay tsy manam-bola” aza. (Isaia 55:1) Tsy mangata-bola mihitsy izy ireo, na dia tohanana amin’ny fanomezana an-tsitrapo aza ny asa maneran-tany ataony. Tena mpanompon’Andriamanitra izy ireo, ka tsy “manatsatso ny tenin’Andriamanitra hahazoam-bola”, fa mitory “amin’ny fahadiovam-po”, satria Andriamanitra no naniraka azy.—2 Korintiana 2:17.
Nahoana àry ny Vavolombelon’i Jehovah no vonona hanampy ny olona, ary ny fananany ihany no ampiasainy amin’izany? Inona no manosika azy ireo hanao izany? Raha manome maimaim-poana izy ireo, midika ve izany fa tena tsy misy valisoa mihitsy ny ezaka ataony?
Valin’ny fihantsian’i Satana
Vonona hizara ny vaovao tsara maimaim-poana ny Kristianina, noho ny sorom-panavotana nomen’Andriamanitra maimaim-poana
Ny hampifaly an’i Jehovah no tena antony anaovan’ny Kristianina marina ny fanompoany, fa tsy ny hanankarena. Azon’izy ireo atao àry ny mamaly ilay fihantsiana nataon’i Satana Devoly, taonjato maro lasa izay. Niresaka momba an’ilay lehilahy marina nantsoina hoe Joba i Satana, ka nihantsy an’i Jehovah tamin’ny fanontaniana hoe: “Moa tsy fanantenan-javatra va no atahoran’i Joba an’Andriamanitra?” Nilaza i Satana fa nasian’i Jehovah fefy nanodidina an’i Joba, ka izany ihany no antony nanompoan’i Joba an’Andriamanitra. Raha vao esorina amin’i Joba, hoy i Satana, ny harenany, dia ho sahiny mihitsy ny hanozona an’Andriamanitra!—Joba 1:7-11.
Navelan’Andriamanitra haka fanahy an’i Joba i Satana, mba hamaliana an’izany fihantsiana izany. Hoy izy: “Indro, eo an-tànanao izay ananany rehetra.” (Joba 1:12) Inona no vokany? Noporofoin’i Joba fa mpandainga i Satana. Nahatoky foana izy, na inona na inona zava-tsarotra natrehiny. Nilaza mihitsy aza i Jehovah fa “olona marina sy mahitsy” i Joba.—Joba 2:3.
Manana toe-tsaina toy ny an’i Joba koa ny mpivavaka marina amin’izao andro izao. Tsy manompo an’Andriamanitra noho ny fitiavan-karena izy ireo.
Fahasoavana maimaim-poana avy amin’Andriamanitra
Ny antony iray hafa mahatonga ny Kristianina ho vonona ‘hanome maimaim-poana’, dia satria “nahazo maimaim-poana” avy tamin’Andriamanitra izy ireo. Andevozin’ny ota sy ny fahafatesana ny olombelona, noho ny fahotan’i Adama razambentsika. (Romana 5:12) Noho ny fitiavan’i Jehovah, dia nirahiny ny Zanany mba ho faty ho sorona, na dia tena sarobidy taminy aza izany. Mazava ho azy fa tsy mendrika an’izany ny olombelona, fa fanomezana avy amin’Andriamanitra ilay izy.—Romana 4:4; 5:8; 6:23.
Izao no nolazain’i Paoly tamin’ny Kristianina voahosotra, araka ny Romana 3:23, 24: “Samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin’Andriamanitra, nefa hamarinina maimaimpoana amin’ny fahasoavany izy noho ny fanavotana izay ao amin’i Kristy Jesosy.” Mandray an’io fanomezana maimaim-poana io àry ireo rehetra manana fanantenana ny hiaina mandrakizay eto an-tany. Rehefa mahazo azy io isika, dia azo ambara hoe marina eo anatrehan’Andriamanitra, ka manana tombontsoa ny ho sakaizany.—Jakoba 2:23; Apokalypsy 7:14.
Nanjary afaka ny ho mpanompon’Andriamanitra koa ny Kristianina rehetra, noho ny sorom-panavotan’i Kristy. Nanoratra ny apostoly Paoly hoe: “Izay nanaovana ahy ho mpanompo araka ny fanomezan’ny fahasoavan’Andriamanitra, izay nomena ahy araka ny fiàsan’ny heriny.” (Efesiana 3:4-7) Voatendry hanao an’io fanompoana io ny Kristianina, nefa tsy mendrika sady tsy afaka ny hahazo izany tombontsoa izany akory. Noho izany, dia tsy tokony hanantena ny hokaramaina mihitsy izy ireo rehefa mitory ny vaovao tsara momba an’io fanomezana io amin’ny olona.
Tia tena ve isika raha manantena fiainana mandrakizay?
Midika ve anefa izany hoe tian’Andriamanitra hanompo azy tsy misy valisoa mihitsy ny Kristianina? Tsy izany velively, satria hoy ny apostoly Paoly tamin’ireo mpiray finoana taminy: “Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany.” (Hebreo 6:10) Tsy mba manao ny tsy rariny Andriamanitra. (Deoteronomia 32:4) Mifanohitra amin’izany kosa, fa “Mpamaly soa izay mazoto mitady Azy” izy. (Hebreo 11:6) Tsy mampirisika ny olona ho tia tena ve anefa ny fanantenana fiainana mandrakizay ao amin’ny Paradisa?—Lioka 23:43.
Ny hampifaly an’i Jehovah no tena antony anaovan’ny Kristianina marina ny fanompoany, fa tsy ny hanankarena
Tsy izany mihitsy. Ny antony voalohany, dia satria Andriamanitra ihany no nahatonga ny olombelona haniry hiaina mandrakizay ao amin’ny Paradisa. Izy no nanolotra an’izany fanantenana izany tamin’ny mpivady voalohany. (Genesisy 1:28; 2:15-17) Rehefa very io fanantenana io noho ny nataon’i Adama sy Eva, dia nataon’Andriamanitra koa izay hamerenana azy io ho an’ny taranak’izy ireo. Mampanantena Andriamanitra ao amin’ny Teniny fa “izao zavatra ary rehetra izao aza dia hovotsorana amin’ny fahandevozana, dia ny fahalòvana, ho amin’ny fahafahana izay momba ny voninahitr’ireo zanak’Andriamanitra.” (Romana 8:21) Tena mety amin’ny Kristianina ankehitriny àry ny ‘mijery ny famalian-tsoa’, toy ny nataon’i Mosesy fahiny. (Hebreo 11:26) Tsy hoe fanambatambazana anefa io valisoa io, fa fanomezana atolotr’Andriamanitra ho an’ireo manompo azy, satria tena tiany izy ireo. (2 Tesaloniana 2:16, 17) Mamaly ny fitiavany koa àry isika, “satria Izy efa tia antsika taloha.”—1 Jaona 4:19.
Ny tena antony tokony hanompoana an’Andriamanitra
Mila mandinika tsara tsy tapaka ny antony anompoany an’Andriamanitra anefa ny Kristianina ankehitriny. Voatantara ao amin’ny Jaona 6:10-13 fa nanao fahagagana i Jesosy, ka namahana olona dimy arivo mahery. Nisy olona nanomboka nanaraka an’i Jesosy taorian’izay, nefa fitiavan-tena no tena anton’izany. Hoy i Jesosy tamin’izy ireo: “Mitady Ahy hianareo . . . noho ny nihinananareo ny mofo ka voky.” (Jaona 6:26) Am-polo taona tatỳ aoriana, dia nisy Kristianina vita fanoloran-tena nanompo an’Andriamanitra toy izany, nefa ‘tsy tamin’ny fo madio.’ (Filipiana 1:17) Nisy aza olona ‘tsy nanaiky ny teny tsy misy kilema’, ka nitady fomba hahazoana tombontsoa manokana rehefa niaraka tamin’ny Kristianina.—1 Timoty 6:3-5.
Mety ho noho ny fitiavan-tena fotsiny àry no hanompoan’ny Kristianina an’Andriamanitra, raha toa ka ny hiaina mandrakizay ao amin’ny Paradisa ihany no tadiaviny. Mety ho faty ara-panahy izy rehefa ela ny ela. Mety ho “reraka” izy, ka hihevitra fa mbola lavitra ny farany, satria toa maharitra ela kokoa noho ny nantenainy ny tontolon’i Satana. (Galatiana 6:9) Mety hanenina mihitsy aza izy nampiasa ny fananany tamin’ny fanompoana. Mampahatsiahy antsika i Jesosy hoe: “Tiava an’i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra.” (Matio 22:37) Tsy mametra ny fotoana hanompoany, ny olona tena manompo an’Andriamanitra noho ny fitiavana. Tapa-kevitra ny hanompo an’Andriamanitra mandrakizay izy! (Mika 4:5) Tsy manenina izy na dia nampiasa ny fananany aza, mba hanompoana an’Andriamanitra. (Hebreo 13:15, 16) Ny fitiavana an’Andriamanitra no manery azy hikatsaka ny Fanjakan’Andriamanitra voalohany eo amin’ny fiainany.—Matio 6:33.
Mpivavaka marina maherin’ny enina tapitrisa ankehitriny no “mazoto manolo-tena” amin’ny fanompoana an’i Jehovah. (Salamo 110:3) Anisan’izy ireo ve ianao? Raha tsy anisany ianao, dia saintsaino ny zavatra omen’Andriamanitra: fahalalana tsara ny fahamarinana; (Jaona 17:3) fanafahana amin’ny fanandevozan’ny fampianaran’ny fivavahan-diso; (Jaona 8:32) fanantenana fiainana mandrakizay. (Apokalypsy 21:3, 4) Afaka manampy anao ny Vavolombelon’i Jehovah, mba hianatra ny fomba handraisanao an’ireo zavatra ireo avy amin’Andriamanitra, ary maimaim-poana izany.